China mmiri ara ehi karama igwe na-emepụta na suppliers | Tonva
Nkọwapụta Nhazi Akụrụngwa
Pee / eyi
Usoro Mpụga Dayameta nke ịghasa
Rewghasa L / D ruru
Onu ogugu nke kpo oku
Extruder ikike ike
Nwụrụ Anwụ Isi Mpaghara kpo oku
Ọnụ ọgụgụ nke cavities
Usoro clamping Ogologo oge
Mepee ọrịa strok
Oriri ike Nsogbu ikuku
Iri mmiri oriri
1.Ihe Nlereanya a na-apụta dị ka ndị a: multi die head, double station and high production. Kalama ọkpụrụkpụ nke ọ bụla uji eze mere ọbụna na imewe nke center nri anwụ isi, esichara site CNC igwe center.
2.Machine na-eji akara ebubata maka akụrụngwa hydraulic ma were valvụ abụọ kwesịrị ekwesị iji chịkwaa ọsọ ọsọ na nrụgide nke mmanụ mmanụ nke nwekwara ike ijikwa na ntanetị. Mmeghari nke dị n’elu kwụsiri ike ma dịkwa mma.
3.MOOG 100 Points Parison Control System nwere ike nakweere iji meziwanye ogo ngwaahịa.
4.This nlereanya nwere ike kwalite n'ime "ngwakọ Type", e ji ebu ihe nke akụkụ nke e mere na servo moto iji nweta dịghị mkpọtụ, mfe ọrụ, kpọmkwem ọnọdụ na ngwa center-elekwasị anya na ebu.
5.Anwere ike ịmepụta igwe iji rụọ ọrụ na ogwe aka robot, onye na-ebugharị, onye na-enyocha mmiri, akara ngosi, igwe nkwakọ ngwaahịa, wdg. Dịka ị chọrọ.
Nke gara aga: Gbanyụọ igwe igwe TVA 1000L- 10000L
Osote: PASTICIDE karama igwe